A software iji tọghata roulette ochie
Ọ bụrụ na ị bụ ọkà mmụta roulette ma ịchọrọ tọghatara dị mfe niile gị ezigbo atụ ogho Archives, Roulette Spin Converter ọ ghaghị ịbụrịrị n'etiti ngwaọrụ nyocha gị.
Emepụtara m ngwá ọrụ a maka ọdịmma onwe m, dịka oge ụfọdụ achọrọ m ịnwale ụzọ dị ngwa nke gụnyere igwu egwu ụfọdụ roulette na oge ọ bụla na-amalite site na ezigbo ederede ederede dị na net na ọnụọgụ ọnụọgụ dabere na npụta nke ọnụọgụ ọnụọgụ (23, 8, 19, 0, 12, wdg.) Achọrọ m ịgbanwe ha na usoro nke ohere a ga-enyocha, n'ihi na o doro anya na nke a mere ka usoro nyocha a na-esote ngwa ngwa.
N'ezie, cheedị na ị chọrọ ịnwale usoro na isii: ịnwe oge ebighi ebi na ọnụọgụ ọnụọgụ ndị dịnụ gụnyere oge nyocha, ịghara ịkọwapụta na ngbako dị mgbagwoju anya njehie na-adị mgbe niile!
N'ihi Roulette Spin Converter ọ ga - ekwe omume ịgbanwe site na ịpị akwụkwọ niile edepụtara na mbụ nke otu ọnụọgụ, na ebe a na - edebe akwụkwọ site na ụkpụrụ nke ohere anyị chọrọ nyocha.
Contụgharị ebe nchekwa: otu esi eji Roulette Spin Converter?
Roulette Spin Converter ọ dị mfe iji: site na bọtịnụ ibu n'aka ekpe ọ ga-ekwe omume ibu ma ọ bụ chekwaa ebe nchekwa na usoro faịlụ ederede.
Wee họrọ otu usoro anyị chọrọ tọghatara nọmba ebugo; n'ihi na nke a ime ihe ị nwere ike họrọ n'etiti ndị na-esonụ 7 nhọrọ:
► Ọbụna iberibe
Ozugbo emere nke a, pịa bọtịnụ ahụ Tọghata na, gbaghara pun ... nke ahụ bụ ya!
Roulette Spin Converter: mbupụ data
Oge na-adịgide adịgide gbanwere ma dịrị njikere ịzọpụta ga-egosi n'aka nri nke usoro ihe omume ahụ (bọtịnụ Save nri) na usoro ederede txt, nke nwekwara ike dezie ya site na Excel ma obu mmemme ndi ozo.
Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ igbanye pseudo-random permanences, dị nnọọ tinye ọnụ ọgụgụ nke spins n'ịwa na pịa bọtịnụ RND Jen.
Na ọrụ a, ị nwekwara ike igbanye ọnụ na-enweghị efu, na nke a, a ga-enyocha igbe kwesịrị ekwesị Ewezuga efu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ịdị mfe nke mmemme ahụ dabara adaba na ịba uru ya yana karịa oge niile ọ ga-azọpụta gị mgbe ị ga-anwale usoro roulette nke dabere na otu n'ime ohere 7 dị. Kedu ihe ị na-eche ibudata ya na njikọ dị n'okpuru?
Nbudata Nbudata	RSConverter.zip - 1 MB